Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 24/03/2020)
Noravank sesinye uninzi zembali kwaye iron monastery complexes in Vayots Dzor iphondo. Ibandla ujikelezwe kunye bukhali red amatye, kwaye i dramatic scenery sesinye eyona izizathu ukuba ukuhlola Iarmenia. I-zembali Noravank yakhiwa ngowe i 13th century kwaye kuthetha "Entsha Monastery" kwi-i-armenian. I-monastery waba yenkcubeko zemfundo umbindi we Iarmenia.
Sagrada Familia lelona watyelela iron ibandla Spain. Ukwakhiwa kwamaziko monument officially wemka kuyo 1882. Architect Francisco de Paula del Villar designed in a classic Gothic style. kodwa, ngo 1883 Antoni Gaudi itshintshe project kwaye nokwakha bale mihla architecture nto famous ehlabathini. Ukwakhiwa ayikwazi izaliswa in 2026, kuba centenary ka Antoni Gaudi ke ukufa.
I-architect kokuba wenze isicwangciso ukwakha 12 kweencopho, abazinikeleyo Kuyesu Krestu kwaye Abafundi, omnye umama kayesu, isine commemorate i-Evangelists. kungoku nje, ingaba ikhaya isibhozo kweencopho. Ngaphakathi ebandleni, Gaudi yenzelwe imiqulu kwi imilo ka-slim umthi trunks leyo yenza ihlathi isimbo. Ukusuka phezulu etempileni, ubona impressive iimboniselo emzini.
Stave ebandleni lelona comment landmarks kwi-Norway. Kubalulekile constructed in 1180 kwaye abazinikeleyo ukuba Umpostile Uandreya. Olu hlobo amabandla ingaba ibaluleke kakhulu iron monuments ukuba Norway architecture. Eminye yayo delicate iimpawu kukho extravagantly qingqiweyo portals kwaye inqamleza kwaye carvings ka-inamba ke iintloko kwi roofs. Oku isimbo waba kunabela kwi-Scandinavia kwaye isetyenziswe kwi-Usa kakhulu.
Indawo ujikelezwe kunye otyebileyo historic lemveli. Vindhellavegen sele ebekwe kufuphi nebandla kwaye icebisa beautiful, ehamba namathuba. Oku historic ezindleleni waba awarded "Norway ke ebukeka indlela" yi-isithai kwiindlela zikawonke-Wonke Yolawulo kwi - 2014.
Duomo iphaya emntla inxalenye milancity in italy, eli nani likhulu cathedral sesinye uninzi comment kunye nabafana structures ehlabathini. Inkosi kwaye Archbishop ka-milancity in italy umnqweno ukwakha eyodwa Cathedral ukuba kuyenza isizwe ukuva uzuko Lukathixo kwaye isixeko udibaniso. Kuba ukwakhiwa Duomo obandakanyekayo abakhi, artisans, kwaye craftsmen ukusuka kuwo Yurophu. Ngamnye umsebenzi ke, amava kunye inkuthalo kwamnceda ukwenza Ngamazwe i-gothic Duomo.
Oku isimbo ngu characterized yi-ubude kwaye dramatic umhombiso. Jikelele isakhiwo ingaba phezu 3400 imifanekiso eqingqiweyo, 135 gargoyles, yaye 700 ibhastile amanani ukuze characterize Duomo. ukusuka ephezulu umgama wenkcochoyi, apho unako khwela i-amanqwanqwa okanye uthathe kuphakamisa, uza kubona handsome Madonnia, indlela: ukumelwa statue Ngumariya kwaye ngomhla cacisa iintsuku unako bonwabele breathtaking iimboniselo ka-milancity in italy.
Hallgrimskirkja ibandla ingaba ephezulu kunye nani likhulu building kwi-Reykjavik kwaye ebonakalayo kulo lonke isixeko. Ibandla sele 74,5 mitha phezulu kwaye abakhenkethi abenako ukungena ebandleni baze bonwabele monumental imboniselo. Isakhiwo ke ukwakhiwa wemka kuyo 1945 kwaye kwagqitywa in 1986. I-modernist ibandla elaye efanayo i-basalt lava flows xa lava cools kulo iliwa.
I-imibhobho ingaba ekude ukusuka ezine iincwadi kwaye ukusebenza ngenyawo. Nazi 102 izintlu, 72 misa, yaye 5275 imibhobho kwaye 15 mitha mde, weighs phezu 25 tones. Isakhiwo ngu anamandla kwaye capable ka-ukuzalisa oyingcwele kwaye enkulu isithuba. Ukwakhiwa kwamaziko icandelo likarhulumente liphelile in 1992 kwaye ibisoloko isetyenziswa kuba ngezixhobo ezahlukeneyo recordings.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ficonic-churches-and-monasteries-in-europe%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)